ABAARBA INNA HAYSEE AQOON YAA INNA SIIYA ?.W.q /Qareen Khadar Aar | Berberatoday.com
Xiliga Abaarta Casharo kama barano ,Xiliga Roobka iyo Raxmadana Kayd ma dhigano, Aqoon yahan keenuna waa Aqoon laawe.
Qoraalkan waxa aan doonayaa in aan kaga hadlo Abaraha markasta inagu soo noqnoqonaya ee aynu markaliya u la,nahay Xal iyo Xeelad lagaga Gudbo ,Ilahay csw waxa uu Garaadka iyo Caqliga inoo siiyay in Dhibaato kasta oo inagu dhacda aynu ka fikirno qaabkii aynu uga gudbi lahay.
Wakhtigan xaadirkaa waxaa Wadankii ka jira Abaaro Dad iyo Duunyaba gallaafatay kuwasoo maanta ka taagan dhamaan Dalkii oo dhan, taas oo halka xaaladdeedu marayso laga garan karo Qayla dhaanta ka baxaysa dhamaan Gobolada Dalka oo dhan kuna dhamanayaan Dadki iyo Xolahiiba ,Darxumaduna u dheer tahay .
Waxaan Xasuustaa Sannadkii 1974kii xilligan oo kale waxaa gayiga Soomalidu ay dagto oo dhan ka dhacay Abaartii ba’nayd ee la magac baxday Dabadheer taas oo si weyn u saamaysay guud ahaan dadka Soomalida oo dhan ,hadana Dawladii Wakhtigaasi jirtay waxa ay ka fikirtay qaabkii ay Dadka uga samata bixin lahayd Abaartasi .
Waxa fiican in Dawlada Dalka ka jirta ay Dadkan iyo Dalkan abaarahu markasta ay kusoo noq-noqonayaan ay Xal u raadiso,waxa aynu wada ognahay in Wakhtigii aynu soo dhaafnay Roobabku si isdaba Joog ah u Da’ayeen Dalka oo dhan ,balse anay jirin Dawlad iyo Dad wada jira oo ka fa’idaysanaya Roobabkaasi .
Waxa aan aad uga soo horjee in kaalmo shisheeye la isku halleeyo ama beesha caalamka loo gacan hoorsado, sida hadda dhaqan keenu yahay ,balse markaliya aan la isticmaalayn Caqligii iyo Garaadkii lagaga bixi laha Abarahan soo Noqnoqonaya,iyo sidii loo joojin lahaa Biyahan Faraha badan ee Sanadkasta Badaha ku shubmaaya .
Waxa kaliya oo aynu naqaana in marka ay Abaartu ina qabsato uu Madaxwaynuhu ku dhawaaqo Salaad Ruub doon ,ma xuma in Ilahay la baryo , lakiin waa in aad Talada ku darsata Roobkii Ilahay Shalay ku Siyay Biyahisii halkay mareen, Waxa kaloo caado inoo ah in Madaxwaynuhu uu Guddi Abareed Markaasi magacabo kuwaasi oo waxooga Rashin iyo Biyo ku saydh-saydha Dadka Abaarahu wax-yeeleyen.
Waan ogahay oo War iguma seegana in Dawlada maanta jirta aanay haysan Dhaqaale iyo Adeeg ku filaan oo ay kaga hortagto Abaraha iyo Masibooyinka Dabiiciga ee soo noq-noqda , waxa kaloo aan ogahay in Dadwaynuhuna ay yihiin kuwo aan u wacyi-gashanayn in ay qataan amarada Dawlada ee ku wajahan in Seero loo sameeyo Dhul Daaqsimeed si xiliga abaarta Xooluhu u helaan waxay Cunaan .
Waxanad arkaysa Dhul dawladu doonayso in Daaqsin loo sameeyo oo Qabiil dhami leeyahay Dhulkayaga anaaga leh cid wax ka qaban kartaana ma jirto ,iyagoo adeeg sanaya Cidan Beled .
Dawladu waa in Fikir iyo talo wadaag usoo bandhigto Bulshada iyo Dadka aqoonta u leh ka hortaga Abaaraha iyo Masiiboyinka ,taas waxaba kasii daran waligay maan maqal Dawlada oo Sadaal iyo Qimayn ka samaynaysa sida wax looga qaban karo Abaraha inagu soo fool leh .
In la kala qorsheeyo Dhulka Beeraha iyo kan Xoolo dhaqatada daaqsinka u ah sidoo kalana lakala saaro dhulka daaqsinta ah iyo dhulka Xoolugu ka cabaan una soo Biyo doontaan.
si loo ilaaliyo nabadguurka ay Reer Miyiga iyo xoolahubu ku keeni karaan dhulka daaqsinta ah,markey xooluhu cabayaan,taasoo aan ula jeedo in lakala fogeeyaa masafad dheerna leeysku jirsiiyo Ceelasha iyo Dhul daaqsimeedka.